June 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Jun 30, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda Hijriguna waxay ku beegan tahay 28 Shawwaal…
Tobanaan Askar Itoobiyaan ah oo lagu dilay qarax ka dhacay Baay.
Axmad	 Jun 30, 2019 1
Wararka kusoo dhacaya warqabadka Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayaa xaqiijinaya in ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan gobolka Baay lala eegtay qaraxyo xoogan oo khasaare ba'an dhaliyay. Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku safrayay wadada…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa Axad, taariikhda Hijriguna waxay ku beegan…
Qarax Shisheeyaha Lagula beegsaday Shabeellaha hoose.
Wararka ka imaanaya wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamada Shisheeyaha lala eegtay qaraxyo xoogan oo khasaare dhaliyay. Wadada isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa…
cusmaan	 Jun 30, 2019 0
Waaliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose, Sheekh Muxamad Abuu Usaama oo meel munaasabad ah ka khudbeenayay ayaa soo hadal qaaday tacaddiyo kala duwan oo uu Mareykanku ka wado gobolka Shabeelaha Hoose. Ugu horreyn waxa uu u…
Sodomeeyo Askari oo lagu dilay howlgal ka dhacay wadanka Afqaanistaan.
Ciidamo katirsan Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa duulaan ballaaran ku qaaday mid kamid ah degmooyinka gobolka Qazni ee wadankaas. Weerarka oo ahaa mid xoogan, jihooyin kala duwanna laga qaaday waxaa uu soconayay in muda ah,…
guuleed	 Jun 30, 2019 0
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Taariikhda Hijriguna waxay ku beegan tahay 26 Shawwaal…
Howgallo Askar iyo Ergay lagu dilay oo ka kala dhacay Muqdisho iyo Bakool.
Axmad	 Jun 29, 2019 0
Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen gobolka Bakool waxay ku dileen askar katirsan maamulka Koonfur galbeed ee gacan saarka dhow la la leh dowladda Itoobiya. Howlgalkan oo ka dhacay duleedka…